Nanome vola 1 tapitrisa dolara amerikana ho an'i Jamaika ny Cruise Line Norveziana
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovaon'ny dia momba an'i Jamaika » Nanome vola 1 tapitrisa dolara amerikana ho an'i Jamaika ny Cruise Line Norveziana
Minisitry ny fizahantany ao Jamaika, Hon. Edmund Bartlett, dia nanambara fa i Jamaika dia tokony handray soa amin'ny fanomezana lehibe avy amin'ny orinasam-pitaterana an-dranomasina manerantany, Norwegian Cruise Line (NCL), hanampy amin'ny ezaka fanarenana COVID-19 any amin'ny nosy.
Nanaiky hanome ny $ 1 tapitrisa an'i Jamaika ny Cruise Line Norveziana ho an'ny fanarenana COVID.
Ny sambo fitsangantsanganana an-tsambo koa dia manome $ 500,000 ho an'ny nosy St. Vincent sy The Grenadines.
Nandany vola an'arivony tapitrisa dolara hanatsarana sy hananganana seranan-tsambo fitsangantsanganana an-tsambo i Jamaika hanatsara ny fahafahan'ny firenena mandray ireo sambo fitsangantsanganana lehibe manerantany.
Tamin'ny famelabelarany ny seho 2021 tao amin'ny parlemanta omaly dia nanambara ny minisitra Bartlett fa nanaiky hanome izany ny Cruise Line Norvezy (NCL) Jamaika 1 tapitrisa dolara amerikana hampiasaina amin'ny programa fanarenana COVID-19, izay mitaky ny fanomezana fanampiana ilaina amin'ny fananganana fotodrafitrasa ara-pahasalamana ilaina hanamorana ny fiverenan'ny fizahan-tany fitsangantsanganana amin'ny fomba azo antoka sy tsy misy tohiny.
Hoy ny minisitra Bartlett: "Mamelà ahy hisaotra ny Cruise Lines Norveziana tamin'ny fanomezana vola mitentina US $ 1 tapitrisa na $ 150 tapitrisa eo ho eo ho an'ny Governemantan'i Jamaika mba hanampy amin'ny ezaka fitantananay COVID-19."